Nsọpụrụ 7: anyị nwalere ya maka gị | Gam akporosis
Honor mere nnukwu mmụba na ogo na Honor 6 Plus, ngwaọrụ nke hapụrụ anyị ezigbo mmetụta maka ogo ya kwubiri na arụmọrụ ya na njedebe dị elu. Ugbu a ụlọ ọrụ Huawei gosipụtara na London flagship ọhụrụ ya, ndị Sọpụrụ 7.
Ngwaọrụ nke Honor bu n’obi iguzobe n’ahịa ndị Europe. Na m agwa gị na mbụ sensations natara n'oge ngosi ngosi nke Honor 7 Ha enweghị ike ịbụ ndị ka mma.
1 Sọpụrụ 7, na-aga n'ihu imewe na àgwà kwuchara
2 Ihuenyo dị ka gwụchara
3 Akụrụngwa dị elu nke njedebe dị elu
5 Ihe mkpisiaka agụ: Honor 7 na-eji ọrụ ya arụ ọrụ
Sọpụrụ 7, na-aga n'ihu imewe na àgwà kwuchara
Na mbu, uzo doro anya di n'etiti Honor 7 na Huawei Ascend Mate 7. Ekwenti abuo nwere otu ihe yiri ya ma nwekwaa onu ahia. Ma nke ahụ bụ na Honor 7 nwere a arụ ọrụ nke ọma igwe yana osisi aluminom na-egbuke egbuke, na-enye mmetụ mmetụ obi ụtọ.
Ihe owuwu a siri ike, ọ na-ahụ anya na ọkpụrụkpụ nke ekwentị ahụ, nke ruru 8.5 mm, ihe karịrị ụfọdụ ndị ọrụ, karịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche nke ahụ Sọpụrụ 7 bụ 2 millimeters thicker karịa Huawei P8.
Akụkụ ya dị obere gbara gburugburu kwe ka Honor 7 bụrụ nke ọzọ ala ijide. Ekwentị buru ibu, nkịtị na-atụle na ọ dị elu 143.2mm elu, 71.9mm ogologo, na 8.5mm. N'ezie, gram 157 ya dị arọ na-eme ka ọ ghara isiri ya ike iburu ya n'agbanyeghị nha ya. Mmetụta izizi gosipụtara mgbe anwalechara Honor 7 na nkwupụta ya bụ na onye nrụpụta chọrọ ịnye ekwentị nwere njiri mara mma. Ma o mewo nke ọma.
El Sọpụrụ ndị na-agụ akara mkpịsị aka 7 Ọ dị na azụ aluminom nke ọdụm, nke dị n'etiti na n'okpuru igwefoto. Akụkụ elu na nke ala nke mkpuchi azụ nke Honor 7 bụ nke plastik, ọ bụ ezie na ọ na-egosi na mmetụ ya adịghị ewe iwe. Nke a bụ ebe antennas ekwentị ahụ dị, na site na iji plastik, netwọk Bluetooth na WLAN agaghị egbochi njikọ GSM nke ekwentị.
Dị ka ọ dị na P8 Lite, ala nke asọpụrụ 7 bu n'obi itinye ọdụ ụgbọ mmiri microUSB, ọkà okwu mono, na igwe okwu maka ịkpọ oku. Ee, ị gụrụ n'ụzọ ziri ezi, mono okwu. Ihie mbụ anyị hụrụ. Anyị ga-ahụ otu o si eme mgbe anyị nwere ike ime nyocha nke ọma.
N’akụkụ aka nri anyị hụrụ olu na olu ike, ihe a na-ahụkarị na ekwentị Huawei. Isi ihe a nwetụrụ ike na bọtịnụ ike iji mee ka ọ dị iche na bọtịnụ njikwa olu.
Honor chọrọ iri uru nke ekwentị ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ a bọtịnụ anụ ahụ n'akụkụ aka ekpe, nke ukwuu na ụdị nke OnePlus 2, nke ga - enyere gị aka ịhazi ka ịnweta ngwa na ọrụ dị iche iche nke Honor 7.
Tinyere bọtịnụ a, Honor ejirila oghere nwere ike ijide kaadị abụọ nano SIM, ma ọ bụ nano SIM na microSD. Otu echiche na m masịrị m na P8 / P8 Lite na onye nrụpụta ahụ erigbuola. Ndị ọzọ dịka Samsung nwere ike ịmụworị ...
Ihuenyo dị ka gwụchara
Na a diagonal nke 5.2 sentimita, Ngosipụta nke Honor 7 ruru mkpebi HD zuru ezu (1920 x 1080 pikselụ) ekele ya IPS panel nke na-enye nkọ na nghọta doro anya nke ihe karịrị oke maka onye ọrụ ọ bụla. Ihe ezi uche dị na ya 424dpi.
Agba dị nkọ ma akụkụ ikiri karịrị ezi. A ga-anwale ihuenyo Honor 7 na gburugburu ebe dị iche iche iji hụ otú ọ si akpa àgwà n'ụbọchị anwụ na-acha, mana ugbu a ọ dị mma nke ukwuu.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè Ihuenyo Honor 7 dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 73% nke n'ihu ngwaọrụ ahụ, ekele ya ntakiri akụkụ okpokolo agba. Ọ bụ ezie na agwalarị m gị na agba ndị ọ na-enye site na ndabara dị mma, anyị nwere ike ịhazi okpomọkụ ha, ihe a na-ahụkarị na ekwentị nke onye nrụpụta Asia.
N'ikpeazụ mara na ihuenyo nke Honor 7 enwere ike ịrụ ọrụ ma kpọchie ya na mgbata okpukpu abụọ, dị ka ụdị LG's KnockOn. Na nkenke, nnukwu ihuenyo nke na-enye arụmọrụ dị mma.
Akụrụngwa dị elu nke njedebe dị elu
Huawei laghachiri nzọ na nke ya iji mee ka asọpụrụ Honor 7. N'ụzọ dị otú a anyị na-ahụ ihe nhazi dị ike HiSilicon Kirin 935, SoC nwere isi asatọ mebere cores anọ 53 GHz Cortex-A1.5 na Cortex-A53 anọ ọzọ na-agba ọsọ ọsọ nke 2.2 GHz.
Ya Mali T-628MP4 GPU ga-ekwe ka egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-aga nke ọma. Ee, ihe nhazi ihe osise a di ala na nke Samsung Galaxy S5 jiri ya mere na nyocha arụmọrụ anyị ga-achọpụta na, dịka ọmụmaatụ, LG G4 ma ọ bụ Galaxy S6 ga-adị ngwa ngwa.
Mgbakwunye ụlọ ọrụ Huawei na batrị 3.100 mAh iji kwado ịdị arọ nke ngwaike nke ọhụụ ọhụrụ ya. N'iburu n'uche na ekwentị niile na-asọpụrụ maka inyefe ikike dị elu karịa nke ọma, ejiri m n'aka na el Sọpụrụ arụmọrụ batrị 7 ọ ga-amaka, ọ bụ ezie na anyị ga-echere ka anyị mee nyocha zuru oke. Nkọwa na-adọrọ mmasị bụ eziokwu na Honor 7 na-ejikọ usoro ngwa ngwa ngwa ngwa.
A ga-enwe ntọala abụọ maka Honor 7: mbipute nwere 3 GB nke Ram na nchekwa 16 GB na ụdị ọzọ nwere 3 GB nke RAM na 64 GB nke ebe nchekwa dị n’ime. Ekwentị abụọ na-arụ ọrụ dị mma, na-agba ọsọ ọsọ, n'agbanyeghị na achọpụtala m ntakịrị ntakịrị na ụdị abụọ ahụ n'oge ụfọdụ. Agbanyeghị na otuto maka nsogbu a bụ omenala EMUI oyi akwa.
Android 5.0 Lollipop bụ ọrụ maka ịkwanye Honor 7 ahụ, ọ bụ ezie na n'okpuru interface EMUI 3.1. Ngwurugwu a enweghị drawer ngwa ma ụlọ ntanetị dị iche iche na-achịkọta ngwa niile arụnyere, na-enye anyị ohere ịhazi ha site na folda.
N'akụkụ a, enweghị nnabata, ị ga-eji sistemu a ngwa ngwa. M ekwuola na Honor 7 na-aza ngwa ngwa na omume anyị, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ anyị na-aghọta a obere oge, dịka ọmụmaatụ mgbe ịmepe nhọrọ ọtụtụ
Enwekwara nkọwa na-akpasu iwe nke ukwuu na nhọrọ ọtụtụ: ịchịkọta ngwa ahụ anọ na anọ na-eme ka ọ ghara iru ala ịhọrọ ngwa ndị anyị chọrọ ịme ngwa ngwa. Mgbe m nwalere ya nwa oge, ahụrụ m na ọ dị mfe ịchọ ozugbo maka ngwa iji ọnọdụ multitasking.
Ihe mkpisiaka agụ: Honor 7 na-eji ọrụ ya arụ ọrụ
Ihe mmetụta nke biometric aghọwo ejiji. Ọtụtụ ndị nrụpụta na-enye ụdị azịza a na Honor agaghị adị obere. Kedu ka onye na-agụ akara mkpịsị aka Honor 7 si arụ ọrụ? dị ka silk.
Nhazi ahụ dị mfe, naanị na anyị ga-agbaso nkuzi iji hazie akara ụkwụ anyị ịmalite iji ihe mmetụta ihe ntinye aka Honor 7.
Otu nkọwa m masịrị m nke ukwuu bụ na Honor 7 akara mkpisiaka na-agụ ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ ịmeghe ihuenyo; Ọzọkwa anyị nwere ike ịnabata oku, were foto na vidiyo, gbanyụọ oti mkpu ma ọ bụ lelee ọkwa ngosi site na iji mmegharị aka na mkpịsị aka gị na onye na-agụ ya. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga - ejide mkpịsị aka aka na onye na - agụ mkpịsị aka iji rụọ ọrụ igwefoto. Nhọrọ m chọtara bara ezigbo uru na nke ahụ na-abawanye ohere nke ihe mmetụta sensọ biometric a.
Igwefoto mbu nke Honor 7 guzobere site na a Anya Sony IMX230, ihe mmetụta megapixel 20 na-enye arụmọrụ dị mma. Rịba ama na igwefoto Honor 7 na-ejikọ usoro nke na-ekewa ọkụ na-abata na onyonyo abụọ dị iche iche ma jiri ha tụnyere, na-enye ohere ilekwasị anya ngwa ngwa.
E nwere ọtụtụ iche iche nke nhọrọ, inwe ike ịse foto panoramic, rụọ ọrụ HDR, ọnọdụ gbawara ... Ngosipụta nke Honor 7 abụghị ebe kachasị mma iji nwalee igwefoto nke ọhụụ ọhụrụ nke ndị nrụpụta, mana mmetụta mbụ na-adị mma.
Anyị enweghị ike ichefu ya 8 megapixel n'ihu igwefoto, karịa ezuru maka eserese onwe onye ma ọ bụ oku vidiyo dị mma.
Dị ka anyị mụtara, 7 GB Honor 16 ga-akụ ahịa Europe na ọnwa Septemba na ọnụahịa na-adọrọ adọrọ: 349 euro. Dị ka m gwara gị, anyị ga-echere ruo mgbe m ga - enwe ike ịme nyocha zuru ezu banyere ekwentị ọhụrụ a, mana ugbu a mmetụta nke Honor 7 hapụrụ m enweghị ike ịka mma.
Onye na-eme Asia na-eme ihe nke ọma ma ọ bụrụ na ọ na-ejigide usoro a, ọ nwere ike bụrụ ọkwa doro anya na Europe. Gị, Kedu ihe ị chere gbasara Honor 7?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Honor 7, mmetụta mbụ mgbe e gosipụtara ya na London
Ọ dị mma n'ihi ụdị ọla ahụ, njigide ahụ dị ka ihe ka mma n'ihi na ọ nwere obere mgbatị, enwere m mmasị na nhọrọ microsd, ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, ọ nwere batrị buru ibu, ọ naghị agba na QHD, ọ nweghị onye na-ekwu okwu n'azụ na na ọnụahịa bụ n'ezie oké ọnụ. N'aka nke ọzọ, enweghị m mmasị na bọtịnụ ndị ahụ adịghị na etiti ahụ, na igwefoto na-apụta (ọ bụ ezie na enwere ike idozi ya), echere m na enwere ike iji okpokolo agba na akụkụ ahụ karịa
Zaghachi Pedro López